Dingana fitomboana ara-panahy
Ohabolana 4 :18 : « Fa ny lalan’ ny marina dia toy ny fipoak’ andro maraina, Izay mihamazava mandra-pitataovovonan’ ny andro. »
2 Kor 8 :7 : « Fa araka ny itomboanareo amin’ ny zavatra rehetra, na amin’ ny finoana, na amin’ ny teny, na amin’ ny fahalalana, na amin’ ny fahazotoana rehetra, na amin’ ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no hitomboanareo amin’ izao fahasoavana izao. »
Efesiana : 4 :13-15 : « mandra-pahatongantsika rehetra ho amin’ ny firaisan’ ny finoana sy ny fahalalana tsara ny Zanak’ Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ ny fahafenoan’ i Kristy ;mba tsy ho zaza intsony isika, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin’ ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin’ ny saim-petsy ataon’ ny olona sy ny fihendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana ;fa mba hanaraka ny marina amin’ ny fitiavana ka hitombo amin’ ny zavatra rehetra ho amin’ Izay Loha, dia Kristy »
Ny fiainana kristianana dia mitombo.
Ny maha tonga ny fiangonana mangatsiaka, na ny kristianina ho reraka an-dalana, dia ny tsy fitomboana araka ny Tenin’Andriamanitra.
Ny zavatra tena tadiavin’Andriamanitra dia ny hananantsika faharetana hatramin’ny farany, ka hitombo hery eny an-dalana eny. Isaia 40:31 : “ Fa izay miandryan’ i Jehovah dia mandroso hery kosa; Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; Hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; Handeha izy, nefa tsy ho reraka.”
Ny fivavahana kristianina dia ambaran’i Jesosy Kristy fa fiainana => “ Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana ; tsy misy olona mankany amin’ ny Ray, afa-tsy amin’ ny alalako.”Jaona 14:6
Ka raha fiainana dia misy aina, raha misy aina dia velona, raha velona dia tokony hitombo.
Ny olana dia ny tsy fahafantaran’ny olona ny tena fivavahana.
Matio 5:13-14 : “ Hianareo no fanasin’ ny tany ; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy ? Tsy misy heriny hanaovana na inona na inona intsony izy, fa hariana any ivelany ka hohitsahin’ ny olona. Hianareo no fahazavan’ izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. ” => manome aina sy fahazavana. Raha mitombo tsara ara-panahy ianao dia manova ny toerana izay misy anao ny fisianao.
Indreto misy dingana 5 ahafahana mitombo ara-panahy :
Fahaterahana indray : tsy maintsy manomboka amin’io fa tsy dingan’ny finoana na vavaka fotsiny. Jaona 3:3 sy 5 : “ Jesosy namaly ka nanao taminy hoe : Lazaiko aminao marina dia marina tokoa : Raha tsy ateraka indrayny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’ Andriamanitra.”Jesosy namaly hoe : Lazaiko aminao marina dia marina tokoa : Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ ny fanjakan’ Andriamanitra izy.”
Manasa anao hamaky : 2 Korintiana 5:17, Jaona 1:12, Asa 2:37-38, Apokalipsy 3:20.
Fanorenana : miorina tsara mba hahatonga anao ho marim-pototra => Famakiana, fandinihana, fampiharana ny filantsara : Matio, Marka, Lioka, Jaona. Ireo no fototra hiorenan’ny fivavahana kristianina sy ny fiainam-panahy satria Jesosy Kristy mihitsy no nametraka azy.
Manasa anao hamaky : 1 Korintiana 3:11, Matio 8:24-25, Matio, Marka, Lioka, Jaona.
Fitomboana : 1 Korintiana 13:11 : “ Fony mbola zaza aho, dia niteny toy ny zaza, nihevitra toy ny zaza, nisaina toy ny zaza ; fa nony efa lehibe aho, dia nariako ny fahazazana.”
Manasa anao hamaky : 2 Korintiana 8:7, Efesiana 4:15, Jaona 3:30, Kolosiana 1:10.
Fanompoana : eto vao manomboka ny andraikitra (anjara fanompoana) ohatra : mpitoriteny, mpitondra fikambanana, mpitandrina... Ny olana dia mbola tsy tonga eo amin’ny fahalebiazana dia manomboka mandray andraikitra ny maro ka tsy fantany izay atao. Eto ny olona vao mahafantatra tsara ny andraikitra izao ampanaovinan’Andriamanitra azy hahatonga azy ho rantsambatan’i Kristy marina.
Manasa anao hamaky : 1kor 12 manontolo, 1kor 13 manontolo, 1kor 14 , Efesiana 4:11-16
Fanahafana an’I kristy : raha tianao ny ho tonga izany hoe lehilahy lehibe, ny fahatanterahana, ny fanahafana an’I Kritsy : 1 Korintiana 11:1 : “ Aoka hanahaka ahy hianareo, dia tahaka ny anahafako an’ i Kristy. ” 1 Tesaloniana 1:6 : “ Ary hianareo efa nanahaka anay sy ny Tompo, satria nandray ny teny tamin’ ny fahoriana be mbamin’ ny hafaliana avy amin’ ny Fanahy Masina .”
Ny fitaizana ny kristianina ho tonga mpianatra no zava-dehibe mba hanohy ny asa.
Matio 28:19 : “ koa mandehana hianareo, diaataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ ny anaran’ ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masinara ny firenena rehetra. ”